Home News Masuul Ka Tirsan Maamulka Somaliland oo Iska Diiday Xil uu u Magacaabay...
Masuul Ka Tirsan Maamulka Somaliland oo Iska Diiday Xil uu u Magacaabay Madaxweyne Muuse Biixi
Madaxweynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa Agaasimihii Madaxtooyada Maamulkaas Khadra Xaaji Geydh u Magacaabay Gudoomiye ku xigeenka Hay’adda Dhowrista Somaliland.
Haweeneyda Xilkaan loo Magacaabay oo Warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in aysan diyaar u aheyn Qabashada Xilkaan, waxa ay sabab ugu dhigtay in uu ka darajo Hooseeyo Xilkii ay heysay, taasi awgeedna ay u diiday qabashadiisa.
Waxa ay intaa raacisay in muddo ay ka shaqeyneysay Madaxtooyada Somaliland, balse Xilka loo Magacaabay aanan u laheyn Xirfad iyo Khibrad ay ugu howlgasho.
Darajada Gudoomiye ku xigeenka ayay ku tilmaamay in ay tahay howl aanan laheyn Awood buuxda, kana awood badan yahay qofka Gudoomiyaha ah, qabashadiisana ay ka door-bideyso in ka maqnaato Saaxada Siyaasadda.
Madaxweynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isku shaandheyn iyo xil ka qaadis ku wada Xubnihii lasoo shaqeeyay Madaxweynihii ka horeeyey ee Axmed Siinlaayo oo ay isku Xisbi ahaayeen.
Mas’uuliyiinta Qaar ayuu u magacaabay Xilal ka hooseeya kuwii ay hayeen, qaarkood ayaa diiday qabashada Xilalkaasi oo ay sheegeen in ay u arkaan Hoos udhac siyaasadeed oo uu Madaxweyne Biixi la damacsan yahay.